प्रेरण हार्डनिंग सतह प्रक्रिया अनुप्रयोग - HLQ हार्डनिंग हीटर
प्रेरण कठोरता सतह प्रक्रिया अनुप्रयोगपत्रहरू
प्रेरणा कडा हो के हो?
प्रेरणा कडाई गर्मी उपचारको एक रूप हो जहाँ पर्याप्त कार्बन सामग्री सहितको धातु अंश प्रेरण क्षेत्रमा गरम गरिन्छ र त्यसपछि छिटो चिसो हुन्छ। यसले दुबै कठोरता र भंगुरता बढाउँछ। प्रेरण तापले तपाईंलाई पूर्व निर्धारित तापमानमा स्थानीयकृत हीटिंग गर्न अनुमति दिन्छ र तपाईंलाई सख्त प्रक्रियालाई ठीकसँग नियन्त्रण गर्न सक्षम गर्दछ। प्रक्रिया रिपिटिबिलिटी यति ग्यारेन्टी गरिएको छ। सामान्यतया, प्रेरण कडाई धातुका भागहरूमा लागू हुन्छ जुन ठूलो सतह लगाउने प्रतिरोधको आवश्यक हुन्छ, जबकि एकै समयमा उनीहरूको यांत्रिक गुणहरू राख्छ। प्रेरण हार्डनिंग प्रक्रिया हासिल गरेपछि, धातुको वर्कपीसलाई पानी, तेल वा वायु ईन्डरमा शान्त गर्नु आवश्यक हुन्छ सतह तहको विशिष्ट गुणहरू प्राप्त गर्न।
प्रेरणा कडाई छिटो र छनौट एक धातु भाग को सतह कडा बनाउन को एक तरीका हो। वैकल्पिक वर्तमानको महत्त्वपूर्ण स्तर बोक्ने तामाको कुण्डो भाग नजिकै राखिएको छ (छोइएको छैन)। गर्मी एडी वर्तमान र हिस्ट्रेसिस घाटा द्वारा सतहको नजिकमा उत्पन्न हुन्छ। क्विन्च, प्राय: पानी आधारित पोलीमर जस्ता थपमा, यस ठाउँमा निर्देशित हुन्छ वा यो डुब्दछ। यसले संरचनालाई मार्टेनाइटमा रूपान्तरण गर्दछ, जुन पहिलेको संरचना भन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ।
एक लोकप्रिय, आधुनिक प्रकारको प्रेरण हार्डनिंग उपकरणलाई स्क्यानर भनिन्छ। भाग केन्द्रहरू बीचमा आयोजित गरिएको छ, घुमाइएको, र प्रगतिशील कुण्डलको माध्यमबाट पारित गरियो जुन दुबै तातो र शान्त प्रदान गर्दछ। Quench Coil को तल निर्देशित छ, त्यसैले कुनै पनि भाग दिएको क्षेत्र छिटो तताई पछाडिको पछि शीतल छ। पावर लेभल, बस्ने समय, स्क्यान (फिड) दर र अन्य प्रक्रिया चरहरू निश्चित रूपमा कम्प्युटरद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ।
केस कडाई गर्ने प्रक्रिया कडा प्रतिरोध, सतह कडाई र थकित जीवन एक कडा सतह तह को सृजनाको माध्यमबाट अप्रभावित कोर माइक्रोस्ट्रक्चरको बृद्धि गर्न प्रयोग गर्दछ।
प्रेरणा कडाई एक विशेष क्षेत्रमा फरास कम्पोनेन्टको मेकानिकल गुण बढाउन प्रयोग गरिन्छ। विशिष्ट अनुप्रयोगहरू पावरट्रेन, सस्पेंशन, इन्जिन कम्पोनेन्टहरू र स्ट्याम्पि .हरू हुन्। वारेन्टी दाबी / क्षेत्र असफलताको मर्मतमा प्रेरण हार्डनिंग उत्कृष्ट छ। प्राथमिक लाभहरू कम्पोनेसन गरिएको क्षेत्रमा ताकत, थकान र लगाउने प्रतिरोध क्षमताको सुधार हुन्।
प्रक्रियाहरू र उद्योगहरू जुन प्रेरण सख्तबाट लाभान्वित हुन सक्छ:
ट्यूब र पाइप हार्डनिंग
प्रेरण कठोरताका फाइदाहरू:
कम्पोनेन्टहरुका लागि मनपर्‍यो कि भारी लोडि toको अधीनमा छन्। प्रेरणाले उच्च उच्च सतह कठोरता प्रदान गर्दछ जुन गहिरो केसको साथ अत्यधिक उच्च भारहरू ह्यान्डल गर्न सक्षम छ। अत्यधिक कडा बाहिरी तहले घेरिएको नरम कोरको विकासको साथ थकान शक्ति बढाइन्छ। यी गुणहरू ती पार्टहरूको लागि वांछनीय छन् जुन अनुभव टोसनियन लोडि experience र सतहहरू जसले प्रभाव बल गर्दछ अनुभव गर्दछ। प्रेरण प्रसंस्करण एक समयको एक अंश गरिन्छ, जुन भागबाट अर्को भागमा धेरै पूर्वानुमान योग्य आयाम चालको लागि अनुमति दिन्छ।
तापमान र सख्त गहिराइमा सटीक नियन्त्रण
नियन्त्रित र स्थानीय तताउने
सजिलै उत्पादन लाइनहरूमा एकीकृत
छिटो र दोहोर्याउने प्रक्रिया
प्रत्येक workpiece सटीक अनुकूलित मापदण्डहरु द्वारा कडा गर्न सकिन्छ
ऊर्जा कुशल प्रक्रिया
इस्पात र स्टेनलेस स्टील घटकहरू जुन प्रेरणको साथ कडा बनाउन सकिन्छ:
फास्टनरों, फ्ल्यांगेस, गियर्स, बेयरिंगहरू, ट्यूब, भित्री र बाहिरी दौडहरू, क्र्यान्कशाफ्टहरू, क्यामशाफ्टहरू, योकहरू, ड्राइभ शाफ्टहरू, आउटपुट शाफ्ट्स, स्पिन्डल्स, टोरसन बार, स्लिउwingिंग रिंगहरू, तार, भल्भहरू, रक ड्रिलहरू, आदि।
बढेको पोषण प्रतिरोध
कठोरता र लगाउने प्रतिरोध बीच एक सीधा सम्बन्ध छ। भागको लगाउने प्रतिरोध इण्डक्शन कडाईको साथ महत्त्वपूर्ण बृद्धि हुन्छ, सामग्रीको प्रारम्भिक अवस्था या त annealed, वा नरम अवस्थामा उपचार गरीएको थियो भन्ने मान्दै।
नरम कोर र सतहमा अवशिष्ट कम्प्रेसिभ तनावको कारण बढ्दो शक्ति र थकान जीवन
कम्प्रेसिभ तनाव (सामान्यतया एक सकारात्मक विशेषता मानिन्छ) कोर र अघिल्लो संरचना भन्दा थोरै मात्रा मा कब्जा सतह नजिक कडा संरचना को परिणाम हो।
भागहरू पछि टेम्पर्ड हुन सक्छ प्रेरक दृढता कठोरता स्तर समायोजन गर्न, इच्छितको रूपमा
एक मार्टेन्सिटिक संरचना उत्पादन कुनै प्रक्रियाको रूपमा, टेम्परिंग कडाई कम जबकि भंगुरता कम हुनेछ।
कठिन कोरको साथ गहिराइ केस
सामान्य केस गहिराइ .030 "- .१२०" हो जुन कार्ब्युराइजिंग, कार्बोनिट्रिडिंग, र उप-महत्वपूर्ण तापमानमा नाइट्राइडिंगका विभिन्न रूपहरू जस्ता प्रक्रियाहरू भन्दा औसतमा गहिरो छ। केहि परियोजनाहरू जस्तै अक्षहरू, वा भागहरू जुन अझै धेरै उपयोगी टाढा भएपछि पनि उपयोगी छन्, केस गहिराइ ½ इन्च वा ठूलो हुन सक्छ।
बिना मास्किंग आवश्यक छनौटिक हार्डनिंग प्रक्रिया
पोष्ट-वेल्डिंग वा पोस्ट-मसिनिiningसँग क्षेत्र नरम रहन्छन् - धेरै अन्य गर्मी उपचार प्रक्रियाहरूले यसलाई प्राप्त गर्न सक्षम छन्।
तुलनात्मक रूपमा न्यूनतम विकृति
उदाहरण: एक शाफ्ट १ "Ø x ”०" लामो, जुन दुई समान अन्तर दूरी पत्रिकाहरू छन्, प्रत्येक २ "लामो र लोडको पहिरन प्रतिरोधको आवश्यक छ। प्रेरण कडाई केवल यी सतहहरूमा प्रदर्शन गरिन्छ, कुल ”” लम्बाई। एक परम्परागत विधिको साथ (वा यदि हामीले प्रेरणाले त्यस वस्तुको लागि पूरै लम्बाई कडा बनायो भने), त्यहाँ उल्लेखनीय रूपमा थप युद्धपाना हुनेछ।
कम लागत स्टील्सको प्रयोगलाई अनुमति दिन्छ जस्तै १०1045
सबैभन्दा लोकप्रिय स्टिल पार्ट्सको लागि कडाईमा कडाईका लागि प्रयोग गरिएको १० 1045 हो। यो सजिलै माच्न सकिने, कम लागतको छ र ०..0.45% नाममात्रको कार्बन सामग्रीको कारणले यसलाई प्रेरणा कडा बनाएर 58 1141 एचआरसी + गर्न सकिन्छ। यसको पनि उपचारको क्रममा क्र्याक हुने अपेक्षाकृत कम जोखिम छ। यस प्रक्रियाको लागि अन्य लोकप्रिय सामग्रीहरू ११1144१/१4140,, 4340१150०, XNUMX XNUMX०, ETDXNUMX, र विभिन्न कास्ट आइरनहरू हुन्।
प्रेरण कठोरताको सीमितता
एक प्रेरण कोइल र टुलि Requ आवश्यक छ जुन भागको ज्यामितिमा सम्बन्धित छ
पार्ट-टु-कोइल जोडी दूरी तताउने क्षमताको लागि महत्वपूर्ण छ, कोइलको आकार र समोच्च सावधानीपूर्वक चयन गर्नुपर्नेछ। धेरै जसो ट्रिटर्ससँग गोल आकारहरू जस्तै शाफ्ट, पिन, रोलरहरू आदि तताउन आधारभूत कुण्डलहरूको शस्त्रागार छ, केही परियोजनाहरूले अनुकूलन कुण्डलको आवश्यक पर्दछ, कहिलेकाँही हजारौं डलरको लागत। मध्यमदेखि उच्च मात्राका परियोजनाहरूमा, प्रति अंश घटाइएको उपचार लागतको लाभले सजिलै तारको तारोलाई अफसेट गर्न सक्छ। अन्य मामिलाहरूमा, प्रक्रियाको ईन्जिनियरि benefits फाइदाहरूको लागि लागत चिन्ताभन्दा बढी हुन सक्छ। अन्यथा, कम भोल्युम प्रोजेक्टहरूको लागि कुण्डल र टूलि cost लागतले प्रक्रियालाई अव्यवहारिक बनाउँदछ यदि एक नयाँ कुण्डल निर्माण गर्नुपर्दछ। अंश पनि उपचारको क्रममा केही तरिकाले समर्थित हुनुपर्दछ। केन्द्रहरू बीच चल्नु शाफ्ट प्रकारका भागहरूका लागि लोकप्रिय विधि हो, तर धेरै अन्य केसहरूमा अनुकूलन टुलि .्ग प्रयोग गर्नुपर्दछ।
अधिकांश गर्मी उपचार प्रक्रियाको तुलनामा क्र्याकको ठूलो सम्भावना
यो छिटो तताउने र शमनको कारणले हो, सुविधाहरू / किनारमा तातो स्पटहरू सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति जस्तै: किवेज, ग्रूभहरू, क्रस होलहरू, थ्रेडहरू।
प्रेरण कठोरताको साथ विकृति
तीव्र ताप / शान्त र परिणामस्वरूप मार्टेन्सिटिक रूपान्तरणको कारण विकृति स्तर आयोन वा ग्यास नाइट्राइडिंग जस्ता प्रक्रिया भन्दा बढी हुने गर्दछ। त्यो भनिएको छ, प्रेरण कडाईले पारम्परिक तातो उपचार भन्दा कम विकृति उत्पादन गर्न सक्छ, विशेष गरी जब यो केवल एक चयन गरिएको क्षेत्रमा लागू हुन्छ।
प्रेरण कठोरताका साथ सामग्री सीमितता
पछि देखि प्रेरणा हार्डनिंग प्रक्रिया सामान्यतया कार्बन वा अन्य तत्वहरूको प्रसार समावेश गर्दैन, सामग्रीले चाहिएको कठोरताको स्तरमा मार्टेन्सिटिक रूपान्तरण समर्थन गर्ने मार्डेनिटिक परिवर्तन प्रदान गर्न अन्य तत्वहरूको साथ पर्याप्त कार्बन समावेश गरेको हुनुपर्दछ। यसको सामान्यतया यसको मतलब कार्बन ०. +०% + दायरामा हुन्छ, 0.40 56 - H 65 एचआरसीको कठोरता उत्पादन गर्दछ। कम कार्बन सामग्री जस्तै 8620 40२० लाई प्राप्त गर्न सकिने कठोरताको परिणामस्वरूप कटौतीको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ (यस अवस्थामा -०-45 HRC)। १००1008, १०१०, १२ एल १1010, १११ as जस्ता स्टील्स सामान्यतया प्राप्य कठोरताको सीमित वृद्धिको कारण प्रयोग हुँदैन।
प्रेरण हार्डनिंग सतह प्रक्रिया विवरण
प्रेरणा कडाई इस्पात र अन्य मिश्र धातु अवयवहरू सतह कडा बनाउनका लागि प्रयोग गरिएको प्रक्रिया हो। तातो उपचार को भागहरू एक तांबेको कुंडली भित्र राखिन्छ र त्यसपछि कुण्डल को एक वैकल्पिक प्रवाह लागू गरेर आफ्नो परिवर्तन तापमान माथि गरम। कुण्डलीमा विद्युत् प्रवाहले कामको टुक्राहरू भित्र एक वैकल्पिक चुम्बकीय क्षेत्र प्रेरित गर्दछ जसले भागको बाहिरी सतहलाई रूपान्तरण दायरा माथि तापक्रममा तताउँछ।
कम्पोनेन्टहरू एक वैकल्पिक चुम्बकीय क्षेत्र को माध्यम द्वारा तातो शमन द्वारा पछाडि रूपान्तरण सीमा भित्र वा माथिको तापक्रममा तताइन्छ। यो एक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रक्रिया हो जुन कपर ईन्डक्टर कुण्डल प्रयोग गरीरहेको हुन्छ, जुन खास आवृत्ति र शक्ति स्तरमा हाललाई खुवाइन्छ।
विभाग सोधिने प्रश्न, टेक्नोलजीज ट्याग प्रेरणा हार्डनिंग मेसिन किन्नुहोस्, उछाल, सख्त प्रेरण, कठोर सतह, कडा सतह प्रक्रिया, प्रेरणा को ताप को ताप, प्रेरणा हार्डनिंग मेसिन, प्रेरणा कडा मेसिन मूल्य, प्रेरणा कडाई मूल्य, प्रेरणा हार्डनिंग प्रक्रिया, प्रेरणा कडा सतह, प्रेरणा हार्डनिंग प्रणाली, के प्रेरणा कडा हो मेल अन्वेषण